राजधानीको माग्न रित्तो थाल बजाएर - BirtaJyoti
राजधानीको माग्न रित्तो थाल बजाएर
adminJanuary 1, 2018 12:00 am 0
धनकुटा । धनकुटालाई प्रदेश नम्बर १ को प्रादेशिक राजधानीको माग राख्दै तीन सातादेखि आन्दोलनमा उत्रिएका धनकुटावासीले आइतबार धनकुटा बजारमा थाल बजाउँदै जुलुस निकालेका छन् ।
प्रादेशिक राजधानीको भाग धनकुटाको भएको र धनकुटाको भाग खोसिन लागेको भन्दै स्थानीयले आफ्ना माग सरकार समक्ष ध्यानाकर्षण गरिएको संकेतस्वरुप हातमा रित्तो थाल बजाउँदै स्थानीयले धनकुटा बजार परिक्रमा गरेका थिए ।
जिल्लामा क्रियाशील राजनीतिक दलको अगुवाईमा गरिएको प्रदर्शनमा राणाकालदेखि हालसम्म प्रशासनिक केन्द्र रहेको धनकुटालाई हाल आएर प्रदेश नम्बर १ को राजधानी नबनाई आफूहरूको भाग खोस्न लागेकाले जसरी धनकटालाई प्रादेशिक राजधानी बनाइनुपर्ने माग गरिएको छ ।
आन्दोलनमा उत्रिएका आन्दोलनकारीले हातमा बोकेको थालमा ‘हाम्रो भाग नखोसियोस्’ भन्ने लेखिएको थियो ।
धनकुटाबजार मुख्य केन्द्र स्थानीय मदन चोकबाट थालिएको थाल जुलुस बजारका विभिन्न भागको परिक्रमापछि पुनः सोही स्थानमा आएर सभामा परिणत भएको थियो ।
सभालाई प्रदेशसभा सदस्य निरन राईलगायत विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले सम्बोधन गरेका थिए । स्थानीयले पर्याप्त पूर्वाधार र भौगोलिक रुपमा उपयुक्त स्थल रहेको भन्दै धनकुटालाई राजधानी बनाउनुपर्ने मागसहित आन्दोलन गर्दै आएका छन् । माग पूरा नहुन्जेल चरणबद्ध आन्दोलन जारी रहने संघर्ष समितिले जनाएको छ ।
झापा–१ यस्तो आयो पहिलो नतिजा
झापा क्षेत्र नम्बर १ को प्रारम्भिक मतपरिणाम १०६४ मत गणना हुँदा कांग्रेस (विश्वप्रकाश शर्मा)– ४२७ माओवादी केन्द्र (सुरेन्द्र कार्की)– ५५० Read More
काठमाडौंको लगनमा भएको आगलागीमा एक वृद्धको मृत्यु
admin- February 17, 2018
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर १२ लगनमा शनिबार बिहान आगलागी हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ भने दुईवटा घर जलेर पूर्णरुपमा नस्ट भएका छन् ... Read More
गाईवस्तुले पनि खान थाले चकलेट !
admin- January 28, 2018
मोरङ । मानिसले रुचाउने चकलेट अब गाईवस्तुका लागि उत्पादन हुन थालेको छ । मोरङको एक उद्योगले गाईवस्तुको दानाका रूपमा चकलेट उत्पादन गरेको हो । विशेष ... Read More
NEWER POSTयसरी जन्मियो ओएसिस एजुकेशन फाउन्डेशन
OLDER POSTकसले दिए ओली र प्रचण्डलाई राजनीतिबाट सन्यास लिन सुझाव ?
०१२३४५६ र १२३४५६ नम्बरको फोन नउठाउनू
पाँचथरका दृष्टिविहीन विद्यार्थी र वृद्धवृद्धालाई सहयोग प्रदान
बिर्तामोडमा रूखबाट लडेर एक व्यक्ति मृत्यु